Diploma in Information(DIT) သင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်................ ~ The ICT.com.mm Blog
Diploma in Information(DIT) သင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်…………….
ဒီ DIT သင်တန်းကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ KMD တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလ တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ DIT သင်တန်းဟာ NCC Education (UK)မှ ဖွင့်လှစ်တဲ့ First Year သင်တန်းဖြစ်တဲ့ IDCS သင်တန်းနဲ့ အဆင့်အတန်း တူညီတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ DIT သင်တန်းကို အောင်မြင်ပါက ကျောင်းသားများအနေနဲ့ NCC(UK)မှ ဖွင့်လှစ်တဲ့ Second Year(IADCS) သင်တန်းကို တိုက်ရိုက်တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ DIT နဲ့ IDCS သင်တန်းတွေဟာ သင်တန်းကြေး အလွန်ကွာခြားပါတယ်။ DIT သင်တန်းဟာ သင်တန်းကြေး စုစုပေါင်း တစ်သိန်းခွဲသာ ပေးသွင်းကြရပြီး အကယ်၍ စာမေးပွဲကျခဲ့လို့ ပြန်ဖြေရင်လည်း တစ်ဘာသာကို စာမေးပွဲကြေး တစ်သောင်းသာ ပေးသွင်း ဖြေဆိုကြရပါတယ်။ IDCS သင်တန်းကတော့ Diploma ကို NCC(UK) က တိုက်ရိုက် ချီးမြှင့်တဲ့အတွက် သင်တန်းကြေး၊ စာမေးပွဲကြေး စုစုပေါင်း ငါးသိန်းခြောက်သိန်းလောက် ကုန်ကြမှာဖြစ်လို့ ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ သင်တန်းကြေး ငါးဆနီးပါးလောက် သက်သာတဲ့ DIT Course ကို ရွေးချယ်တက်ရောက်သင့်ကြပါတယ်။
……………DIT Course မှာတော့ သင်ရိုး(Syallabus) များအနေနဲ့
-DevelopingaWebsite(DWS)
-Foundation English Course
တို့ကို သင်ယူကြရပါမယ်. DIT Course မှာ Assigment များကိုလည်း IDCS မှာလိုပဲ သတ်မှတ်ချိန် အတွင်းမှာ ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလ ပြီးဆုံးရင်တော့ အဖွဲ့လိုက် Practical Project များကို Program ရေးဆွဲ ရှင်းလင်းပြသကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
DIT ကျောင်းသားများအနေနဲ့ အဆိုပါ Assignment, Project များကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောငိနိုင်ကြဖို့အတွက် အပိုဆောင်းဘာသာရပ် (Value Added) များအနေနဲ့…………
-Macromedia Dreamweaver(Web-Design ဖန်တီးရန်)
-Microsoft Word (စာစီစာရိုက်)
-Microsoft Access (Database)
-Microsoft Power Point( Presentation တင်ပြရန်)
-Adobe Photoshop(Photo ပြင်/ဖျက် တည်းဖြတ်ရန်)
-Using E-mail & Internet စတဲ့ Software Application များကိုလည်း သင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ DIT သင်တန်းရဲ့ Exam အားလုံးကိုတော့ KMD မှာပဲ Local Exam များအနေနဲ့နဲ့ စစ်မေးမှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာပဲ အမှတ်ခြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကို တတ်ရောက်ဖို့ လိုအပ်အရည်အချင်း……….
– DIT သင်တန်းမှာ ပေးသွင်းရတဲ့ သင်တန်းကြေးတွေအနေနဲ့ တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ(Local Currency) နဲ့သာပေးသွင်းရတာမို့ ကျောင်းသားများအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ ကုန်ကျမှုသက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– သင်တန်းချိန်ကိုလည်း သင်တန်းသားများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အချိန်အားလပ်မှု အလုပ်ကိုင်တို့အပေါ် မူတည်ပြီး………..
-တစ်နေ့လျှင် စာတွေ့ (2)နာရီ၊ လက်တွေ့ (2)နာရီ တစ်ပတ်(5)ရက် weekdays
-တစ်နေ့လျှင် စာတွေ့(4)နာရီ၊ လက်တွေ့(4)နာရီ စနေ၊တနင်္ဂနွေ Weekend ဆိုပြိး မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ရွေးချက်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်………….
KMD Computer Center မှာ စုံစမ်းနိုင်သလို…
ဗိုလ်တစ်ထောင်မှာရှိတာပါ.. အဲဒီ့ကျောင်းမှာလည်း စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်..
Newer Photoshop သုံးနေရင်း နေရာလွတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် . . .
Older Nokia ရဲ့ ပထမဆုံး Android Phone ကို ဒေါ်လာ (၁၁၀) ဖြင့် ရောင်းချမည်